Olee Otú M Pụrụ Nyefee Data Site Old ekwentị ka New iPhone agba ọsọ iOS 9
Na Apple unveiling ya ọhụrụ melite nke iOS, a dum ọtụtụ nke ị ga-achọ nweta nkwalite si gị ochie iPhone, na ụfọdụ n'ime unu-eguzosi ike n'ihe android ọrụ nwere ike dị nnọọ mesịrị mee ka ngbanwe na-enweta ihe a kpọwo kasị dị ịrịba ama iOS update rue ụbọchị. Ke ibuotikọ emi, anyị ga-eme n'aka na ị maara ihe niile mkpa iji mee ka gị ntughari ka ihe iOS9 nyeere ngwaọrụ mfe.
Part 1. Nyefee niile na 1 click (dị site na iOS / Android / Symbian ka iOS)
Otu n'ime ndị kasị ewu ewu data transfer softwares si n'ebe, MobileTrans eme ka ya niile kwa mfe n'ihi na ị nyefee media. Nke ahụ pụrụ ịgụnye ihe niile kọntaktị na ozi ederede na ọbụna ndị ọzọ media na-agụnye photos, music na vidiyo. Ị pụrụ ọbụna nyefee ndị dị iche iche ngwa n'etiti iPhone na Android na ndị ọzọ ịwa Systems na-agụnye OS meworo ochie dị Nokia (Symbian) phones- na dị nnọọ a click!
Ezie na Wondershare MobileTrans mara maka ya ezigbo data transfer eweta, e nwere ọtụtụ ndị ọzọ a atụmatụ na-atụ anya:
• Buru ekwentị gị data mma: All gị mkpa data nwere ike nọ nwetara na PC gị na, ma ị na-eji ihe iPhone, Android ma ọ bụ Nokia.
• Ọ bụrụ na ị na-ịmafe site na otu agadi ekwentị na iPhone ma ọ bụ Android, software na-ahapụ gị weghachite backups kere site MobileGo, Samsung Kies na Blackberry Desktọpụ Suite.
• The software-eme ka-akpụ akpụ bụghị nanị songs, ma dum listi ọkpụkpọ site na iTunes a dịgasị iche iche nke apụl ngwaahịa, nakwa dị ka na-android igwe.
• Ọ bụrụ na i nwere otu iCloud ndabere, ị nwere ike mfe nyefee ya na gị na android, na-eme n'aka na ị hapụ onye ọ bụla nke gị dị oké ọnụ ahịa foto ma ọ bụ gị mkpa kọntaktị.
Nzọụkwụ nyefee data iji Wondershare MobileTrans
Nzọụkwụ 1 - Gaa wondershare.com/phone-transfer~~V na pịa na-agbalị ya free bọtịnụ. Ị nwekwara nhọrọ ịzụta software e mesịrị bụrụ na ị chọrọ.
Nzọụkwụ 2 - Wụnye ebudatara faịlụ na-emeghe Wondershare Mobiletrans software. Ị ga-ahụ ihe interface dị ka e gosiri na foto n'okpuru.
Pịa na 'na ekwentị ekwentị transfer' button ka malitere.
Nzọụkwụ 3 - Jikọọ gị iPhone / Android ekwentị gaa na PC na-eche maka software na-egosipụta ha na interface. The isi iyi ekwentị ga-emere na ekpe mgbe ebe ekwentị ga-egosipụta na nri. Ị nwere ike ịgbanwee abụọ nanị site na ịpị tụgharịa button n'elu.
Nzọụkwụ 4 - Lelee data na ị chọrọ ịkwaga si ọhụrụ gị na ekwentị gị ochie ekwentị. Dị ka e gosiri n'elu, ị nyefee gị kọntaktị, ozi ederede, ndekọ, na a otutu ihe. Na mgbe ị na-mere, dị nnọọ pịa obere-acha anụnụ anụnụ button n'okpuru checklist. Ee, ọ bụ na mfe!
Nzọụkwụ 5 - Dị nnọọ dina azụ ma na-ekiri ka gị data na-agafere si gị iPhone gị Android ngwaọrụ. Dị ka data na-agafere ozugbo, ị na-adịghị ọbụna mkpa na njikọ Ịntanetị maka usoro.
I nwekwara ike ihichapu gị ochie data, nke nwere ike ịbụ n'ezie bara uru ma ọ bụrụ na ị na-eche echiche nke na-ere gị ochie ekwentị.
Dị pịa na 'Ihichapu gị ochie ekwentị data' button ị hụrụ na mbụ interface na gaba site na ịpị 'Ihichapu now' bọtịnụ. O nwere ike buru a mgbe, ma otu ugboro ọ na-eme, ị pụrụ ijide n'aka na ozi nkeonwe gị ga ghara ịdaba ọjọọ aka.
Part 2. Nyefee data si iOS ka iOS iji iTunes
Nke abụọ usoro bụ obere lengthier karịa Wondershare dị ka ọ na-agụnye-akwado ihe data na mgbe ahụ iweghachi ya ọhụrụ gị iPhone, ma ọ bụ dị nnọọ ka irè. A bụ otú ị na-eme ya:
Nzọụkwụ 1- Jikọọ gị iPhone na kọmputa na-emeghe iTunes, ọ dịkwa mkpa na ị na-eji ọhụrụ mbipute nke software.
Nzọụkwụ 2- Pịa na aha ma ọ bụ akara ngosi nke ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ 3- mbụ, họrọ "Nke a na kọmputa" nhọrọ na ekpe kọlụm, wee pịa na "Ndabere ugbu a" nhọrọ na nri n'igbe.
Nzọụkwụ 4- Ọ bụrụ na ị chọrọ ichebe nkwado ndabere na mpaghara, nanị ego na 'encrypt iPhone ndabere' nhọrọ ma họrọ a paswọọdụ.
Nzọụkwụ 5- bụrụ na ị chọrọ iji nyochaa ndabere na ị na kere, pịa na Ngwaọrụ nhọrọ n'okpuru Mmasị. Ị ga-ahụ ndepụta nke kere backups ha na oge na ụbọchị.
Nzọụkwụ 6- Ugbu a iweghachi gị data na ọhụrụ gị na ekwentị, dị nnọọ jide n'aka na ngwaọrụ na ị na-eweghachiri data bụ ọhụrụ karịa gị isi iyi ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 7 - Jikọọ ọhụrụ gị iPhone na kọmputa na-emeghe iTunes.
Nzọụkwụ 8 ruo Ozugbo ị pịa na ngwaọrụ aha, ihe niile ị chọrọ ime bụ họrọ 'Weghachi ndabere' nhọrọ ke Backups kọlụm, na n'ikpeazụ dị họrọ ndabere ka weghachi.
Nzọụkwụ 9 Họrọ ndabere na unu na mbụ kere, na ị ọma na-aga.
Part 3. Nyefee data si iOS ka iOS iji iCloud
Nke a bụ a pụtara na-erughị-ewe oge usoro karịa iji iTunes. Otú ọ dị, ị ga-mkpa a wifi njikọ ga-esi kasị n'ime ya.
Nzọụkwụ 1 - On gị ochie iPhone, ịmepụta ndabere na iCloud nanị site na ịme ọpịpị na nkwado ndabere na mpaghara bọtịnụ na iCloud.
Nzọụkwụ 2 - Mgbe gị ndabere zuru ezu; dị nnọọ na a lee anya na Ikpeazụ ndabere oge. Nke a bụ nnọọ cautionary nzọụkwụ, na-eme ka n'aka gị data e kwadoo n'ụzọ dị irè.
Nzọụkwụ 3 - Anyị na-mere nkwado ndabere na mpaghara. Ugbu a, iweghachi gị data na na onwunwu ọhụrụ iPhone, ike anya gị ochie iPhone mbụ. Gwụsịrị ime nke a pụrụ iduga esemokwu na backups on iCloud.
Nzọụkwụ 4 - Na welcome ihuenyo ọhụrụ gị iPhone, họrọ gị mba, asụsụ, na gị wifi netwọk.
Nzọụkwụ 5 - Ozugbo ị na-mere na nke ahụ, na-esote na ihuenyo ị ga-ahụ na nhọrọ dị ka e gosiri n'okpuru. Họrọ nhọrọ na-arịọ gị iji weghachi si iCloud ndabere.
Nzọụkwụ 6 -Ndị fọdụrụ bụ pụtara easy- log n'ime gị iCloud akaụntụ na-ekweta na usoro na ọnọdụ.
Nzọụkwụ 7 -On ọzọ ihuenyo, họrọ ndabere ị dị nnọọ kere na gị ochie iPhone na dị nnọọ na-emetụ na Weghachi nhọrọ.
Nke a nzọụkwụ nwere ike na-ezi a mgbe. Ma ngwa ngwa gị njikọ Ịntanetị bụ, quicker ga-usoro.
Nzọụkwụ 8 -Once ọ na-eme, gị iPhone ga Malitegharịa ekwentị ma ị ga-enwe gị niile kwadoo data na ya.
> Resource> iPhone> Olee Otú M Pụrụ Nyefee Data Site Old ekwentị ka New iPhone agba ọsọ iOS 9 site iClou